आवाज नेपाल, October 25, 2017
आइफोन–एट पाउने चाहनामा यी चीनियाँ युवती यो हदसम्म गुज्रन तयार भइन् कि हेर्नेहरु अचम्ममा परे । चीनकी १७ वर्षीया Xiao Chen ले आइफोन–एट पाउने चाहनाका लागि कथित रुपमा आफ्नो कुमारीत्व बेच्ने घोषणा सोसल मिडियामा गरेकी छिन् । उनको घोषणापछि ती किशोरीमाथि जे भयो, त्यसको उनले कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । उनको यस्तो पोष्ट पढेर नाना नामकी […]
भाइरल भइरहेछ मानव अनुहार भएको बिरालोको तस्बिर, पुलिसले बताए वास्तविकता
आजकाल सोसल मिडियामा मानव अनुहार भएको बिरालोको फोटो भाइरल भइरहेको छ । दाबी गरिए अनुसार उक्त बिरालो मलेसियामा जन्मिएको छ जसको अनुहारको बनावट मानिसको जस्तै छ र यसलाई एक ल्याबमा राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय पुलिसले यस्तो कुनै पनि दाबीलाई झुटो बताएको छ । आफूहरुलाई यस्तो कुनै पनि बिरालो जन्मिएको खबर नआएको पुलिसले बताएको छ […]
एजेन्सी प्रेम भन्ने कुरा कहिले, कोसँग बस्छ भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो । केटा र केटीबीचमा भएको माया पिरतीको कुरा त सामान्य हो । तर यहाँ एकजना युवतीको रोबोटसँग माया बसेको छ । घटना फ्रान्सको हो । लिली नामकी एक युवतीको रोबोटसँग प्रेम बसेको घटनाले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । उक्त प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको वर्ष […]
दुनियाँका अनौठा कानून: जहाँ महिनामा एकपटक श्रीमतीलाई पिट्न पाइन्छ
एजेन्सी । विश्वका विभिन्न देशमा अनेकथरी कानून छन् । कतिपय कानून यस्ता बेतुकका छन् र अजीव पनि छन् । त्यस्ता कानूनको पालना गर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यस्ता कानूनहरु कतिपय केवल किताबका पानामा मात्र पनि सीमित छन्, केही पालना पनि भइरहेका छन् । दुुनियाँका यस्तै अनौठामध्येका केही कानून यस्ता छन्: · क्यानडाको […]
हज्जारौंले सेयर गरिरहेका छन् यो जोडीको फोटो, कारणमाथि विश्वास हुने छैन तपाईंलाई
आवाज नेपाल, October 23, 2017
हुन त जोडीले आफ्नो मायाका पलहरु सोसल मिडियामा सेयर गरिरहन्छन् तर यो जोडीको भने लभ फोटोसुट तिब्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ । यी अमेरिकी जोडीको फोटोसुट एक एजेन्सीले गरेको हो र यसलाई फेसबुकमा अपलोड गरियो जसलाई ८५ हजारले सेयर गरेका छन् । के थियो यसको कारण ? यो एक अमेरिकी जोडी स्टेफनी र आर्नको फोटोसुट […]
रुसको क्रासनोदर सिटीमा पुलिसले एक ‘नरभक्षी’ जोडीलाई पक्राउ गरेको छ । जोडीले आफ्नो अपराध स्विकार गरेका छन् । उनीहरुले सन् १९९९ देखि अहिलेसम्म ३० जनालाई मारेर उनीहरुको मासु खाएको स्विकारेका छन् । पुलिसले यो जोडीको घरबाट आठ शवको अंग पनि बरामद गरेको छ । मानव मासुको बनाएर राखेका थिए अचारः पुसिल रिपोर्ट अनुसार क्रासनोदर सिटिमा बस्ने […]
आइफोन अहिले युवापुस्ताका लागि स्टाटस सिम्बोल बनेको छ । बजारमा आएका महंगा आइफोन हात पार्नका लागि युवापुस्ताले के सम्म गर्दैन ? हुँदा हुँदा एक चिनिया किशोरीले बजारमा आएको नयाँ आइफोन एट प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो भर्जिनिटी नै लिलामीमा राखेकी छिन् । जियो चेन नामकी १७ वर्षकी ती किशोरीले आइफोन किन्ने पैसा जुटाउन आफ्नो भर्जिनिटी बेच्ने […]
आवाज नेपाल, October 21, 2017
एजेन्सी । थुप्रै पटक हाम्रा घर वरिपरि यस्ता मानिसहरु बस्ने गर्दछन् जसको स्वभाव र व्यवहारले हामीलाई तनावमा पारिदिन्छन् । केही छिमेकी धेरै नै मिलनसार हुन्छन् भने कोही कसैसँग पनि बोल्दैनन् । आफ्ना यस्तै एक छिमेकी बारे रेडिट प्रयोगकर्ता चिजबल्सले मानिसहरुलाई जानकारी दिए । यद्यपी, यी प्रयोगकर्ता कुन देशका हुन् त्यसबारे उनले खोलेका छैनन् । रेडिट […]
मृत्यु जुनसुकै बेला, कुनै पनि रुपमा आउन सक्छ । संसारका कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्यु कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारे थाहा हुँदैन । आज हामी तपाईंलाई मृत्युसँग जोडिएका १० डरलाग्दा तथ्यबारे बताउँदैछौं जसबारे थाहा पाउँदा तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । आफैंलाई खान थाल्छ शरिरः जिउँदो हुँदा हामी जे पनि खान्छौं त्यसलाई पेटमा रहेको इन्जाइमले खाएर […]
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले प्रेमिकालाई लेखेको प्रेमपत्र
आवाज नेपाल, October 20, 2017
बाराक ओबामा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालका योजनाका कारण धेरै लोकप्रिय छन् । उहाँको वाककलाले धेरैलाई लोभ्याउँछ पनि । मिसेल ओबामासँगको उहाँको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट बिदा हुनु अगाडि गरिएको एउटा समारोहमा उहाँले मिसेल र आफ्ना छोरीहरुको प्रेरणाले नै आफू सफल भएको बताउनुभएको थियो । तर उहाँ मिसेलसँगको सम्बन्धमा जोडिनुपूर्व ‘लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप’ […]